Heavy Duty Cantilever Racking System miaraka amin'ny forklift ara-teknika dia afaka mamaha ny fitahirizana fitaovana lava sy fitaovana tsy miovaova. Ny tsanganana avo indrindra dia mety hahatratra 10 metatra, ny halavan'ny sandry cantilever dia 1.0 - 1.2m, ary ny fahafahan'ny entana dia mahatratra 1 taonina.
Heavy Duty Cantilever Racking System dia azo ampiasaina amin'ny trano sy ivelany. Azo ampiasaina milentika mafana izy io mba hipetrahana amin'ny ivelany. Izy io koa dia azo apetraka valindrihana eo an-tampon'ny tsanganana, avy eo azo toherina ny rivotra, ny orana ary ny tara-masoandro.
Cantilever racking dia mampiasa sandry mahitsy sy matanjaka manokana, mety hitahiry endrika lava, boribory, lovia ary fitaovana mavesatra tsy ara-dalàna. Araka ny fahafahan'ny enta-mavesatra dia mizara fomba maivana sy salantsalany ary mavesatra izy ireo.
Aorian'ny fampitomboana ny takelaka vy na hazo eo amin'ny sandry, dia mety indrindra ho an'ny toerana kely sy trano fitehirizana ambany kokoa, miaraka amin'ny fampiasana toerana ambony. Tena mety sy haingana ny mamaky sy mamoaka ny entana, miaraka amin'ny fahitana mora ny fitehirizana entana.
◆ Ny habetsaky ny tanjaky ny enta-mavesatra mifanaraka amin'ny fampiharana mahazatra sy ny seismika
◆ Ny famolavolana tsanganana afovoany dia mamorona habaka marindrano tsy voafetra
◆ Namboarina tanteraka
Ny fitaovam-piadiana dia azo ovaina mora foana miakatra sy midina amin'ilay tsanganana ary misy halavany miaraka amina karazana capacité avy amin'ny 220 ~ 1,500 kgs (100 ~ 3,300 lbs).
Ny sandan'ny cantilever iray dia mety ho lafiny iray na lafiny roa.
Izahay dia manome HEVERLS cantilever mitaingina lava 2021k 1500kgs avo lenta miaraka amin'ny famonoana herinaratra ho an'ny fitahirizana fantsona na MDF. Izahay dia manokan-tena amin'ny saha fitahirizana trano fitahirizana mandritra ny 25 taona. Manantena izahay fa ho mpiara-miasa maharitra any Shina.
HEGERLS cantilever mitaingina 1500kgs avo lenta 2021 miaraka amin'ny famonoana herinaratra ho an'ny fitahirizana fantsona na MDF
1.Product fampidirana ny cantilever talantalana
3.1.Izany dia mety amin'ny MDF sy fitahirizana fantsona. Ny famatrarana ny sandry tsirairay dia mety hahatratra 1000kgs
3.2 ny haavon'ny paositra dia mety hahatratra 10m ambony
4.Production antsipirihany ny cantilever talantalana
4.1 Ny loko dia azo namboarina. Manana loko manga sy volomboasary izahay. Azo namboarina ihany koa izy io.
4.2 ny lavaka dia miorina amin'ny fanapahana laser. Tena izany
Teo aloha: HEGERLS mitondra fiara amin'ny rafitra fitifirana
Manaraka: Fampielezam-peo amin'ny radio HEGERLS